चुनावपछि खुलेको शेयर बजारमा ८५ अङ्कको पहिरो
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बजार बढ्ने अनुमान विपरीत शेयर बजार परिसूचक नेप्से उच्च अङ्कले घटेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक ८४.९ अङ्कले घटेर २ हजार २६५ अङ्कमा ओर्लिएको छ।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से उच्च अङ्कले बढ्यो
लगातार घटिरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार भने उच्च अङ्कले बढेको छ।
पूँजी बजारमा भइरहेको भित्री कारोबार रोक्न अर्थ मन्त्री शर्माको निर्देशन
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजी बजारमा भित्री कारोबार भइरहेको बताएका छन्।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त धितोपत्र बजारको नियामक संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त भएका छन्।
नेप्सेको सीईओमा कृष्णबहादुर कार्की शेयर बजारको फ्रन्टलाइन रेगुलेटर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा पाल्पाका कृष्णबहादुर कार्की नियुक्त भएका छन्।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से १०५ अङ्कले बढ्यो शेयर बजारमा आइतबार उछाल आएको छ। गत साताभरि १५१ अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक आइतबार भने १०५ अङ्कले बढेको छ।
शेयर बजारमा १०० अङ्कको गिरावट, ८ बाहेक सबै कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो शेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार एकै दिन १०० अङ्कले घटेर २ हजार ८२० बिन्दुमा ओर्लिएको छ। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा ३.४३ प्रतिशत कम हो।
नेप्से परिसूचक ३०.७५ अङ्कले घट्यो, ४ अर्ब ६२ करोडको कारोबार बुधबार शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) ३०.७५ अङ्कले घटेको छ।
३२ अंकले बढ्यो नेप्से, परिसूचक २६१७ बिन्दुमा सोमबार शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) ३२.०३ अङ्क (१.२४) प्रतिशतले बढेको छ।
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न नयाँ प्रक्रिया शुरू अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न फेरि अर्को सूचना प्रकाशित गरेको छ।
७१ अंकले बढ्यो नेप्से, २९ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट आइतबार शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) ७१.२० अङ्क (२.८२ प्रतिशत)ले बढेको छ। उच्च अङ्कको वृद्धिसँगै २९ कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ।
५६.७३ अङ्कले बढ्यो शेयर बजार, कारोबार रकम २ अर्ब ३८ करोडमा सीमित मंगलबार शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) ५६.७३ अङ्क (२.४१ प्रतिशत)ले बढेको छ।
शेयर बजार ६ प्रतिशत बढ्यो, सर्किट लागेर कारोबार बन्द मंगलबार शेयर बजार परिसूचक (नेप्से)ले ६.०१ प्रतिशतको छलाङ मारेको छ।
शेयर बजार लगानीकर्ताले चार महीनामै गुमाए ११ खर्ब
शेयर बजारमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति चार महीना नपुग्दै रु. ११ खर्ब ४९ अर्बले घटेको छ।
लिलाम बढाबढमा शेयर ब्रोकरका १ सय लाइसेन्स बिक्री गर्ने धितोपत्र बोर्डको प्रस्ताव
एक दशकपछि शेयर ब्रोकरको संख्या थप्ने तयारीमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले लिलाम बढाबढमा एक सय वटा अनुमतिपत्र बाँड्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
३२ अङ्कले बढ्यो नेप्से, परिसूचक २५४६ बिन्दुमा
सोमबार शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) ३२.२२ अङ्कले बढेको छ।
शेयर बजारमा निराशा, कतिसम्म घट्ला? शेयर बजार परिसूचक नेप्से ओरालो लाग्ने क्रम साताको पहिलो दिन आइतबार पनि जारी रह्‍यो।
ज्योति विकास ब्यांक बोन्ड, २०८७ ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत ज्योति विकास ब्यांकद्वारा निष्कासित रु. १.५ अर्ब बराबरको ‘ज्योति विकास ब्यांक बोन्ड, २०८७ ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ।
१८ अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक २७६९ बिन्दुमा बुधबार शेयर बजार १८.०६ अङ्कले उकालो लागेको छ।
७८.८२ अंकले बढ्यो नेप्से, ६ अर्ब ३१ करोडको कारोबार मंगलबार शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) ७८.८२ अंकले बढेको छ।
शेयर बजार ८७.६३ अङ्कले बढ्यो, फाइनान्स र जलविद्युत्‌मा लगानीकर्ताको आकर्षण सोमबार शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) ८७.६३ अङ्कले बढेको छ। बढेको बजार २६७२.२५ बिन्दुमा पुगेर रोकिएको हो।
दशैंपछि खुलेको शेयर बजारमा जम्मा डेढ अर्बको कारोबार पाँच दिनको दशैं बिदापछि आइतबार खुलेको शेयर बजारमा जम्मा रु.१ अर्ब ४९ करोड ७३ लाखको कारोबार भएको छ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना बर्खास्त सरकारले शेयर कारोबार प्रकरणमा मुछिएका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गरेको छ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानासँग स्पष्टीकरण सोध्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानासँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
ग्लोबल आइएमई ब्यांकको डिबेञ्चर नेप्सेमा सूचीकृत ग्लोबल आइएमई ब्यांक लिमिटेडको ‘डिबेञ्चर २०८६/८७’ ऋणपत्रको ३० लाख इकाइ नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ।
नेप्से परिसूचक ७६.६५ अंकले घट्यो, मनकामना लघुवित्तमा चाहिं सकारात्मक सर्किट साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) ७६.६५ अंकले घटेको छ।
५.७४ प्रतिशतले बढ्यो नेप्से, कारोबार ९ अर्ब ८२ करोडमा सीमित २१ भदौमा शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) ५.७४ प्रतिशतले बढेको छ।